Raha tsy misy ny fiovana, tokony havoakan’ny HCC mialoha ny 8 febroary izao ny voka-pifidianana ofisialy ho an’ny loholona. Efa ampolony ireo fitoriana sy ny fitarainana kirakirain’ireo mpitsara eo Ambohidahy amin’izao fotoana izao. Miompana amin’ny fanafoanana ny voka-pifidianana noho ny hosoka na tsy fanarahan-dalàna izany amin’ny ankapobeny.
12 be izao ireo minisitra niara-dia amin’ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina, tany Mahavelona Foulpointe, omaly, nametraka ny Vatsin’ankohonana. Anisan’izany ny eo anivon’ny Atitany, Fahasalamana, ny Mponina, ny Asam-panjakana, ny Tontolo iainana, ny Serasera sy ny fifandraisana, ny Asa sy ny fanofanana momba ny asa, ny Indostria ary ny Asa vaventy.
Araka ny loharanom-baovao, tsy maintsy tanterahina mialoha ny faran’ity volana ity avokoa ireo fifampiarahabana eny anivon’ireo minisitera isan-tokony eto amintsika. Efa maromaro ireo nahavita izany, saingy mbola betsaka koa ireo vao hamita ny azy ireo minisitera.